7 Arrimood Oo Laga Guntay Ciyaartii Saaxil iyo Xaysimo + Dhacdooyinkii Ciyaarta
HomeChampions League7 Arrimood Oo Laga Guntay Ciyaartii Saaxil iyo Xaysimo + Dhacdooyinkii Ciyaarta
Gellinkii dambe markii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, xadhiga ka jaray ciyaaraha, kubbaddana u laagay garoonka, waxa laba saf isku dhinac galay ciyaartooyada labada gobol ee Saaxil iyo Xaysimo oo nasiib u yeeshay kulanka furitaanka ee madaxda Somaliland ay daawanayaan.
Ciyaartan waxa 4-0 ay guushu ku raacday Saaxil oo bandhig ciyaareed lama filaan ah, aadna loogu sacabo tumay kusoo bandhigay Hargeysa Stadium. Laba ka mid ah goolasha xulka gobolka Saaxil waxa u dhaliyey xiddiga hoggaaminaya ee Mustafe Messi.
Haddaba, maxaa ciyaartan laga bartay?
Awoodda sarraysa ee Saaxil: Xiddigo khibrad leh, oo ay ka muuqato in ay wakhti badan isku heleen, si adagna ugu diyaar garoobeen tartankan ayaa ka dhex muuqday, kubbadda marka ay ka soo qaataan difaaca, waxa markiiba ay ka ciyaarayeen dhinacyada weerarka, halkaas oo khalkhal ka geliyeen difaaca Xaysimo oo u maare waayey Mustafe Messi oo ahaa xiddiga garoonka.
Qaabkii Barcelona ayey ugu tamariyeen casaanka: Iyadoo ciyaartu maraysa 1-0 ayaa kaadhka cas loo taagay ciyaartoy ka tirsan xulka gobolka Saaxil, markaas oo taageereyaasha iyo inta khibradda u leh ciyaaruhuba fisheen in awooddoodu hoos u dhici doonto, libintana ay la hoyan doonto Xaysimo, laakiin taasi may dhicin. 10 ciyaartoy oo kaliya iyagoo ah ayey nidaam cusub isku habeeyeen. Difaaca inta ay adkaysteen, ayey kubbad weerar celis ah (Counter attack) ku khalkhaliyeen difaaca Xaysimo, waxaanay taasi u suurtogelisay in ay 3 gool oo kale dhaliyaan, ciyaartuna ku dhamaato 4-0. Xulka gobolka Saaxil
Kubbad Wanaagga Xaysimo: Inkasta oo laga badiyey, haddana qaabka ciyaarta ay u waajaheen iyo kubbad isku-dhiibkoodu wuxuu ahaa mid wanaagsa. Iyagoo laga dhaliyey goolal badan, haddana waxa ka muuqatay deggenaan iyo in ay sugayaan furasadahooda si ay goolal u dhaliyaan. Dhawr fursadood oo wanaagsan ayey sameeyeen, hase yeeshee, nasiibku muu siinin goolal.
Xulka Gobolka Xaysimo
Gool-wade wanaagsan: Cali Sucuudi inta badan way yaqaanaan dadka Somaliland ee la socda kubbadda cagtu, gaar ahaan ciyaartoygu. Laf-dhabar ayuu u ahaa guushii Saaxil ka gaadhay Xaysimo, sababtoo ah kubbado badan oo halis ah oo loola tegay ama lagu toogtay si fudud ayuu isugu duubay ama isaga leexiyey. Wuxuu garoonka ka baxay isagoo madaxiisu sarreeyo, niyad wanaagsan, kuna faraxsan wax-qabadkiisa shakhsiga ah iyo ka guud ee kooxda.
Farqigu wuxuu ahaa Messi: Dabcan wuu shabbahaa ciyaartoyga uu magaciisa qaatay ee Messi oo lagu yaqaano in uu daqiiqad kasta isbeddel ku samayn karo ciyaarta. Tii ayaa uu hirgeliyey Mustafe Messi, waxaana uu noqday halyey la qaban kari waayey, laba gool oo uu dhaliyey iyo mid uu ka shaqeeyeyna xulkiisa guul ugu horseeday.
Markii ugu horreysay garoon cagaaran: Ciyaaraha gobolladu sannadkan way ka duwan yihiin kuwii hore, waxaana lagu ciyaarayaa garoon cagaaran oo aan boodh iyo wax kubbadda kaa qariya midna lahayn. Bilicdiisa ayaa ku soo jiidaynaysa. Kulankii ugu horreeyey oo lagu furay labadan xul ee Saaxil iyo Xaysimo, waxa ka muuqatay in kubadda waddanka laga ciyaaro ay farsamadeedu sarrayso, balse boodhka iyo dhasku ka qariyo dadka.
Madaxdii daawatay: Samir badan ayaa ka muuqatay madaxda, inta badana ciyaarta way daawadeen. Madaxweynaha ayaa hor-kacayey iyo marwada koowaad. Hadalka furitaanka ayaa uu bixiyey madaxweyne Siilaanyo wakhtigii nasashada, ciyaartoyga gudaha ku jirayna waxa dhiirigelin u ahayd inay madaxdii waddanka u sarraysay daawanayso.
New York Yankees Vs Houston Astros – ALCS Game 6 – October 20, 2017 Highlights | C Highlights
Manchester City Oo Pep Guardiola Heshiis Saddex Sanno Ah La Saxeexatay